Dalxiiska Bayaanka Glasgow ee ku saabsan Isbeddelka Cimilada Ciyaartoyda cusub ee awooda badan ayaa ka badan UNWTO ama WTTC
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wakhtiga waarta » Dalxiiska Bayaanka Glasgow ee ku saabsan Isbeddelka Cimilada Ciyaartoyda cusub ee awooda badan ayaa ka badan UNWTO ama WTTC
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Investments • Shirarka • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Wararka Spain • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK
In kasta oo Isbaanishka iyo isbahaysiga dalxiiska ee cusub ee Sucuudigu hoggaaminayo ay rabaan tallaabo aan caddayn, Baaqa Glasgow ee Tallaabada Cimilada ayaa la saxeexay toddobaadkan.
In ka badan 300 oo daneeyayaasha dalxiiska ah ayaa saxeexay Baaqa Glasgow ee Waxkaqabadka Cimilada todobaadkan, kaas oo aqoonsanaya baahida degdega ah ee loo qabo qorshe caalami ah oo joogto ah ee ficilka cimilada ee dalxiiska.
Iyadoo mashiinka dacaayadaha ee UNWTO uu rajeynayay inuu sidoo kale u beddelo dhacdadan isbeddelka cimilada u ololaynta WTTC si ay u taageerto Xoghayaheeda Guud ee hannaanka xaqiijinta dib-u-doorashada ee soo socota dabayaaqada bishan, WTTC waxay caddaysay inaysan cidna taageersanayn.
Dunida dalxiisku si kastaba ha ahaatee waa midaysan marka ay timaado isbedelka cimilada. Qaarkood waxay keenaan bayaan, qaar kalena waxay diiradda saaraan ficil aad u daran, laakiin Isbeddelka Cimilada ayaa hadda ah diiradda dib-u-billowga cusub ee warshadaha safarka iyo dalxiiska iyo ka dib COVID-19.
Sida lagu sheegay war qoraal ah oo soo gaadhay eTurboNews ka the Golaha Socdaalka iyo Dalxiiska Adduunka, WTTC, Baaqa Glasgow waa hindise uu hogaaminayo isbahaysi ay ku jiraan UNEP, Dalxiiska Baaqa, Mu'asasada Safarka oo ay taageerto UNFCCC.
Ma ahan UNWTO oo kaliya inay hogaamiso, sida lagu sheegay bayaanka WTTC.
WTTC waxay xiriir adag la leedahay badi hay'adaha Qaramada Midoobay oo ay ku jiraan kuwa kor ku xusan, sidoo kale, waxaan leennahay go'aan adag oo ku aaddan Isbeddelka Cimilada iyo Xubnahayagu waxay rabeen inay muujiyaan hoggaan iyagoo taageeraya hamiga ku dhawaaqista waqti muhiim ah.
Xubno badan oo ka tirsan WTTC sida Accor, Iberostar, iyo kuwa kale ayaa saxeexay bayaanka, sidaa darteed waxa muhiim ahayd in WTTC ay ku darto codkeeda si ay u taageerto hamiga ku wajahan eber saafiga ah iyo sida ay uga go'an tahay in ay taageerto xubnaheeda si ay u horumariyaan Qorsheyaasha Cimilada.
Si kastaba ha ahaatee, taageerada WTTC ee laga sheegay Axdiga Glasgow sinaba ulama xidhiidhin doorashada Xoghaynta Guud ee UNWTO ama hannaan kasta oo siyaasadeed, sida lagu turjumay faallooyinka qaarkood ee lagu arkay baraha bulshada ee ku dhow UNWTO.
Marka loo eego qoraallada warbaahinta bulshada ee lagu arkay goobaha taageerada ee UNWTO, Baaqa Glasgow waxaa lagu horumariyay iskaashiga UNWTO, Barnaamijka Deegaanka ee Qaramada Midoobay (UNEP), Booqo Scotland, Mu'asasada Safarka, iyo Dalxiiska waxay ku dhawaaqeen Xaalad Degdeg ah oo Cimilo ah, iyada oo la raacayo qaab dhismeedka Hal Planet Sustainable Tourism Program waxaa ka go'an in uu dardargeliyo isticmaalka iyo qaababka wax soo saarka waara.
The Warshadaha Dalxiiska waxay rabaan inay qayb ka noqdaan xalka Isbeddelka cimilada khatarta ah, ayuu yiri Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga, oo ka hadlayay isbaheysiga cusub ee dalxiiska caalamiga ah ee Sacuudi Carabiya iyo Spain horraantii toddobaadkan ka dhacay Glasgow.
UNWTO si kastaba ha ahaatee kamay mid ahayn hindisaha Sucuudiga iyo Isbayn ee ay hogaaminayeen daneeyayaasha iyo dawladaha awooda leh. Ballanqaadka hindisahaas, wuxuu ahaa ficil, ma ahan oo keliya go'aanno.
Intaa waxaa dheer shirkii mustaqbalka ee maalgashiga (FII) ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay Sacuudi Carabiya, natiijadu waxay ahayd heshiis Saudi Arabia iyo Spain ku biirista ciidamada si dib loogu habeeyo dalxiiska ka dib COVID oo ay ku jirto UNWTO.
Nofeembar 7, 2021 at 00: 12
Waxa aad seegtay oo aad si khaldan u tebisay nuxurka Baaqa Glasgow. Dhammaan waxay ku saabsan tahay ficil. Shaaciyeyaashu waxa ay ballan qaadayaan in ay yareeyaan qiiqa kaarboonka 50% marka la gaadho 2030 waana in ay soo saaraan qorshayaal hawleed 12 bilood gudahood marka la saxeexo, ka dibna sannad kasta ka warbixiyaan horumarkooda.